Dr. Cabdiraxmaan Cirro hoggaamiye maanta Somaliland u baahantay, sababahan awgood. - somalilandlivemedia
20:10 17. May 2017
Murashaxa Xisbiga WADDANI Dr . Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ruuxii la shaqeeyay hadduu alle ka baqo nifaaqna iska dhawro wuxu si dhaba u sheegi kara xaqiiqda ku duugan hoggaamintiisa samirka badan, wuxuuna danbi la’aan odhan kara oo alle aanu ku cadaabayn inuu yidhaahdo “Waa Murashaxa ugu mudan ee ay maanta Somaliland u baahantay hoggaamintiisa iyo inuu bulshada Jamhuuriyadda Somaliland dib u mideeyo rajada ummaddana soo celiyo “.
Somaliland maanta uma baahna hoggaamiye bulshada u kala qaybiya darajooyin. Mid kamid ah murashaxiinta oo aanay khasab ahayn inaan xuso ayaa nin Oday ah oo rer Somaliland ahi waydiiyay afar su’aalood oo ah.
1. Awdal iyo rer Boorame maxaad ka yeelaysa hadaad guulaysto?
2. Gobolada SOOL iyo Sanaag bari maxaa kaga qorshaysan?
3. Beesha aad ka soo jeedo maxaad ka yeelaysa?
4. Somalia sidii laynoo kala guri laha maxaa kaga meel yaala ??
Wuxuu ugu jabaay oo alle ogaa.
1. Awal iyo Boorame nuuqdanbe iyo cabasho iyo is xariifin dib looga maqli maayo hadaan guulaysto.
2. SOOL iyo Sanaag bari labada diimood mid uun baan ku daraya. (Amma Somalia amma Somaliland).
3. Beesha aan ka soo jeedo ma ogoli qof juuq yidhaahda gacan adag ayaan ku qaban .
4. Somalia dagaal ayaa iga meel yaal.
Sidaa ayuu ugu jawaabay murashaxaasi been iyo dacaayad maha oo walle ah.
Marka la eego qorshayaasha murashaxaas dhammaantod ku talo galadiisu waa qaar xoog ku ururaaya oo kakan. Nasiib darro in bulshada uu u bandhigo ayay ahayd sida caalamka murashaxiintu u iibiyaan siyaasadooda ay wax ku xukumayaan halagu doorto amma halagu diidee, lakiin kuwaas iyo kuwo kale oo laga yaabo inuu hoosta ku haysto waa qaar u qarsoon.
Dr. Cabdiraxmaan Cirro hoggaamiye maanta Somaliland u baahantay, sababahan awgood., By Siyaasi Muniir Axmed Cigaal-
Murashaxa Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Cirro muddo bilo kooban ah ayaan u aha kaaliyihiisa gaar ka ah ee War-baahinta, si dhaw oo joogto ahna aanu u wada shaqaynay. Si kasta markaan u eegay alle anoo ka baqaaya marka rer iyo nin jeclaysi aan lagu eegin waa shakhsigii maanta ay Somaliland u baahnayd ee isku wadi laha, haday nabadd ahaan tahay iyo haday midayn shacaba tahay, waa ruuxa rer Awdal, Hargaysa iyo Gabilay , Burco barigeeda iyo wixii galbeedba ah, tabashada SOOL iyo Sanaag bari intaba isku wadi kara ee si degan u dhagaysan kara eedla’aana isku maamuli kara .
Madaxweyne ruuxa noqonaya gaar ahaan Somaliland oo ah Qaran curdin ah oo u baahan in laysku wado waa inuu ahaada hoggaamiye degan oo aan gacantiisu dhiiranayn.
Go’aanka iyo doorashadase waxa leh shacbiga Somaliland, saddexda Murashax mid kasta xaq ayuu u leeyahay in la doorto lakiin Somaliland saaka si kasta ninkii isku wadi laha waa murashax Cirro, wixii qaybana rabaa og alle sidii roon haka yeelo waa aayaheeniye.
Allow alleh .
DAAWO Barnaamij Cajiiba oo Laga Diyaariyey Murashax Cirro
“Lacagta Ummada Oo La qaybiyaa ama Koox La nooleeyaa……,” Sheekh Adam-siira
Jawaabta, Micheal Walls, Beenaale Jeegaanta u Kiraysan iyo Aflagaadayntii Beesha Garxajis
Halkan Ka Daawo Maayarka Hargeysa Durba Hab Qabiilnimo Wado Cusub ka Dhisaya Guriga Muuse Biixi Ka Degan Yahay Magalaada Hargeisa wakhti Caasimada Hargeisa badi ay wadooyin la dahay
Newer PostMaxada Xuuraanka iyo Basaasnimada ee Xisbiga Kulmiye oo Siri Kahoos Baxday-Video
Older Post Furay Shirweyne Lagaga Tashanayay Sidii Kor Loogu Qaadi Lahaa Gaarka ah